Waa Maxay Fayadhowrka Biyaha? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Martigalinta Shirka IGAD Guul ayay u Tahay Diblomaasiyada Soomaaliya -Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, September 17, 2016
Talooyinka Muhiimka ah ee Guurka Ka Hor!
BBC Somali, July 24, 2020
Arrinta uu Vladimir Putin Sameeyay ee Suxufiyiinta Ruushka ay ka Argagexeen!
Daba Huwan 1995
Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi), October 1, 2019
Maxaad Ka Ogtahay Saameynta Wacyigalinta?
Ilhaan Ciise Maxamed, March 30, 2018
Cabdijabaar Sh. Axmed — April 9, 2020
Fayadhowrka biyaha waa habka nadiifinta biyaha si loo cabi karo, loogu qubeysan karo, cuntadana loogu karsan karo, iyo adeegsiga kale. Biyaha nadiifka ah ayaa muhiim u ah dhammaan dadyowga kunool gudaha dalka, sababta oo ah walxaha waxyeelada leh ee ku jira biyaha waxay sababi karaan jirro iyo xitaa dhimasho.
Tusaale ahaan, biyaha aan loo isticmaalin daawooyin waxay keeni karaan fayras, bakteeriyada, iyo walxaha kale ee khatarta ku ah caafimaadka.
Daafaha caalamka, waxaa jira dad badan oo aan haysan biyo nadiif ah. Xaqiiqdii, waxaa jira inka badan hal bilyan oo dad ah oo ku nool dunida oo aan maalin walba helin biyo nadiif ah. Intaa waxaa sii dheer, sannad kasta, malaayiin dad ah ayaa wajahaya cudurro dilaa ah oo lala xiriirin karo biyaha la cabbo ee aan nadiifka ahayn iyo dhibaatooyinka kale ee fayadhowrka.
Helitaanka biyo nadiif ah waxay ka hortagi karaan cuduro badan sida in la helo musqulo iyo hab-dhaqanno nadaafadeed oo wanaagsan, ka hortaga halista in si fudud lagu qaado cudurro laga hortegi karo, sida shubanka, shuban-biyoodka ba’an, daacuunka, iyo caabuqyada neef-mareenka.
Sida ay sheegtay haayada caruurta ee qaramada midoobay Unicef, in kabadan 900 oo qof oo ku nool Soomaaliya, oo badankood ah carruur ay da’doodu ka yar tahay shan sano jir, ayaa u dhintay daacuun (Unisef Somalia 2019). Marka dumarka lagu qasbo inay ku dhalaan xaaladahaas liita nolosha hooyada iyo dhallaanka ayaa sidoo kale khatar ku jira.
Wadamada horumarsan, dadka caadi ahaan waxay xor ka yihiin walwal ku saabsan fayadhowrka biyaha. Dowladaha hoose ayaa daryeela biyaha wasakhaysan ka hor intaysan ku faafin tuubooyinka. Si kastaba ha noqotee, dadka ku nool meelaha aan lahayn tas-hiilaadka daaweynta biyaha waxaa laga yaabaa inay welwel ka qabaan nadaafadda.
Qaababka guud ee loo daaweeyo biyaha waxaa ka mid ah uumiga, shaandhaynta, is dhaafsiga ion, iyo jeermis-dilaha. Dheecaanka uumiga waxaa ka mid ah isticmaalka walax si loogu daro walxaha yaryar ee ka kooban walxaha waaweyn ka dibna ka soocidda walxaha waaweyn ee biyaha; Kala shaandhaynta waxaa ku jira shaandhaynta walxaha sida sheyga, dhoobada, waxyaalaha dabiiciga ah, iyo biraha qaarkood.
Waaxaa ku jira horumarka bulshada iyo caafimaadkooda in bulshada ay helaan biyo nadiif ah.
Adsorption waxay u baahan tahay adeegsi kaarboon firfircoon si loo nuugo oo looga saaro wasakhda dabiiciga ah ee aan loo baahnayn, midabada, iyo dhadhanka. Is-weydaarsiga Ion waxaa lagu sameeyaa noocyada mowjadaha si togan iyo si xunba ee loo yaqaan ‘molecules’ ee ‘ion’ ka dibna laga takhaluso waxyaalaha aan loo baahnayn; waxay ka takhalusi kartaa qaar ka mid ah wasakhooyinka sunta ah, waxaana loo isticmaali karaa in biyaha looga dhaqaaqo arsenic, nitrogen, iyo uranium.
Jeermiska waa geeddi-socod kale oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo biyaha, taas oo ku lug leh dilka microbes-ka iyadoo la adeegsanayo koloriin, chloramine, ultraviolet iyo shucaaca osone-ka ama jeermis-dile kale.
Kuwa biyaha wanaagsan leh waxay isticmaali karaan miirayaasha biyaha nadiifiya si ay uga nadiifiyaan wasakhda biyahooda marka loo baahdo. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah biyaha ceelasha waxay noqon karaan kuwa wasakheysan oo ay lagama maarmaan tahay in la qodo ceelal cusub. Tijaabintaan waxay gacan ka geysaneysaa go’aaminta in ceelka biyuhu uu badbaado u yahay cabitaanka.
Maqnaanshaha kiimikada iyo miirayaasha fayadhowrka biyaha, waxaa jira qaabab qaarkood oo biyo nadiifinta ah oo laga yaabo inay uga dhigaan mid fiican oo la isticmaali kara. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka hababkan waxaa laga yaabaa inaysan biyuhu ka dhigin mid la isku halayn karo.
Hal hab oo caan ah oo fayadhowrka biyaha ah ayaa ah in la karkariyo biyaha ilaa dhowr daqiiqo. Ikhtiyaar kale ayaa ah in lagu daro 1/8 qaado (.616 mililiitar) oo warankiilo ah 1 galaan (3.78 litir) oo biyo ah oo muddo 30 daqiiqo ah. Haddii biyuhu ay daruur tahay halkii la caddeyn lahaa, waxaa fiican in la isticmaalo qaado 1/4 qaado (1.23 milliliters) illaa 1 galaan (3.78 litir) oo biyo ah.
Tags: Waa Maxay Fayadhowrka Biyaha ‘water sanitation?
Next post Waa Maxay Faa’iida Laga Helo Safarka?
Previous post Maxaa Nagala Gudboon Xaaladda Cusub ee Karoonaha (Covid19)?